Baxwayiswa ngokusebenzisa ugesi e-Phase 4 | News24
Baxwayiswa ngokusebenzisa ugesi e-Phase 4
ISITHOMBE: sigciniweKungesikhathi kunesiteleka sikagesi eMbali Phase 4 ngenyanga eyedlule.
IKHANSELA lasendaweni yaseMbali Phase 4 uMnu Thamsanqa Sithole unxusa amalunga omphakathi akulendawo ukuba basebenzise ugesi ngokucophelela njengoba abakwa-Eskom besematasa bezama ukulungisa inkinga kagesi kule ndawo.
Ugesi wakulendawo uyawa njalo kanti sekuvele ukuthi lokhu kungenxa yokuthi isigubhu esiphakela ugesi(transformer) kulomphakathi wakulendawo siyesindwa ngenxa yokwamda kwesibalo sabantu abahlala kule ndawo.
Lokhu kuze kwaholela ekutheni kube khona isiteleka esikhulu kuyona le ndawo nalapho umphakathi kade ukhala khona ngogesi ngenyanga eyedlule. UMnu Sithole uthe kubalulekile ukuthi umphakathi ubambisane nabo ngesikhathi besazama ukulungisa indaba kagesi.
“U-Eskom usanda kufaka i-transformer yesibili nosekusele ukuthi ihlanganiswe bese izokwazi nayo ukuthi iphakele umphakathi ugesi.Okwamanje sicelaumphakathi ukuba usebenzise ugesi ngokucophelela kuze kube uyaphothulwa lo msebenzi. Sekusele kancane ukuthi kulunge yonke into ukuze ugesi ulunge ungasahluphi kule ndawo.
“Uma ngabe nje umphakathi wakithi ungagwema ukuthi ubase ama-heater kanye nezinye izifudumezi kungaba ngcono. Kanjalo nalabo abasuke bekhona emakhaya ngezikhathi zasemini siyabanxusa ukuba bapheke ukuze ugesi ungasindelwa ntambama uma ngabe sekuphume abanye emsebenzini,” kubeka yena.
Uthe ugesi uhlupha kakhulu uma ngabe bonke abantu sebebase amaheater okanye bewusebenzisa bonke ngesikhathi esisodwa.
Uthe ngeSonto mhla ziyisishiyagalolunye uwe kwaze kwaba amahlandla amahlanu kwaphoqeleka ukuba bafonele ka-Eskom.
“Kungcono ukuba nawo ugesi wokukhanyisa nokubuka omabonakude kunokuba ungabi nawo nhlobo ngoba naku sewuwile. Ukubezekela nje kuphela esikucelayo ukuze kuzophothulwa lomsebenzi,” kuphetha uMnu Sithole.